निर्मलाको बुवालाई उपचार गर्न काठमाण्डौं ल्याएपछि कान्छि आमा लक्ष्मीको भयो यस्तो बेहाल, धरधरी रुँदै गरिन् यस्तो याचना (भिडियो हेर्नुस्) – Nagarik Today
November 26, 2018 by suchanapati
काठमाण्डौं, १० मंसिर । छोरीको बलात्कार पछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । छोरीको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमै धर्ना बसेका उनी धर्ना बसेको ८ दिन पछि मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा परेका हुन् ।
उनलाई अहिले उपचारका लागि काठमाण्डौं ल्याइएको छ । यज्ञराजसंगै निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पनि काठमाडौं आएकी छन् । कञ्चनपुरमा जारी धर्नामा निर्मलाकी कान्छि आमा छन् । भारतमा रहेका निर्मलाका बुवा र कान्छि आमा लक्ष्मी पन्त छोरीको हत्या पछि नेपाल आएका हुन् । निर्मलाको बुवा काठमाडौं ल्याइए पछि धर्नामा बसेकी कान्छि आमा विछिप्त भएकी छन् । उनले धर्नामा बसेर आफुहरु माथि परेको यो बज्रपातमा सरकार रमिते बनेर बसेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरिन् । धरधरी रोएकी उनले आफुहरु माथि परेको यो अन्यायका विरुद्ध साथ दिन सबैसंग आग्रह गरिन् । उनले आफ्ना पतिलाई मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्थामा पुर्याउने सरकार भएकाले यो अवस्थाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताइन् ।
उनले यस्तो निरिह अवस्था हुदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताइन् । उनले त्यसो भनेर धरधरी रुँदै गर्दा नजिक बस्नेहरुले उनलाई सम्झाएका छन् । उनले निर्मलालाई न्याय दिलाउन आफु पनि धर्नामा बस्दा केही ब्यक्तिले आफुलाई अनावश्यक लाञ्छना समेत लगाउने गरेको भन्दै गुनासो गरिन् । आफुले भारतमा पनि निकै दुख कष्ट गरेर जिवन यापन गरेको बताउँदै छोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन आग्रह गरिन् । उनले आफुले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । ‘मलाई यो त्रिपालमा एक्लै बस्न रमाइलो लागेर आएको हो र छोरीलाई न्याय दिलाउन आन्दोलनमा उत्रने श्रीमानको निर्णय हो । उनको निर्णयमा मैले साथ दिएको हो, उनले रुंदै भनिन् सरकारले मेरो छोरीलाई छिटो न्याय दे ।’
﻿ cialis 5mg preis.
Prevनिर्मलाका बुवा भेट्न नगद सहयोग सहित अस्पताल पुगे पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
Nextआज प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैं, सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको शुरुआत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश